Iikholeji ze-Ohio eziphezulu kakhulu ezikhethiweyo
Iikholeji zase-Ohio eziphezulu
I-Ohio ineekholeji ezizimeleyo nekarhulumente kunye neeyunivesithi. Izikolo ezingezantsi ziye zanyulwa kwizinto ezihlukeneyo: idumela, izinga lokugcina umnyaka wokuqala, ii-4 kunye ne-6-year-graduation rates, value, kunye nokubandakanyeka kwabafundi. Iikholeji ziyahluka kakhulu ngobukhulu kunye nohlobo lwesikolo endiyibhale nje ngokuluhlu lwama-alfabhethi kunokuba ndibaphosele kunoma yiluphi uhlobo lwesimo sokufakelwa.
ICarnegie Hall kwiKholeji yaseBaldin Wallace. Pwojdacz / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Indawo: Berea, Ohio
Ubhaliso: 3.933 (i-3,287 izifundo zakudala)
Uhlobo lweZiko: iikholeji zobunini bobucala obuzibandakanya neCawa yaseMelika
Ukuphazamiseka: Imbali ebandakanyekayo efana no-1845; Inkqubo yezemidlalo ye-NCAA Division III; iiklabhu zemfundo ezingaphezu kwe-100 kunye nemibutho; 12 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprogram yaseBaldwin-Wallace kwikholeji
I-Western Western Reserve yaseYunivesithi eHaydn Hall. Allen Grove
Indawo: eCleveland, eOhio
Uhlobo lweziko: eyunivesithi yophando olunzulu kunye namandla obunjineli
Hlola i-Campus: I- Case Western Photo Tour
Ukwahlukana: Isahluko sePhi Beta kappa ngamandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; ilungu loMbutho weeMerika zaseYunivesithi ngamandla ophando; iinkqubo ezisezantsi kakhulu kwishishini, unyango, unesi, kunye nobunjineli bendalo. ezininzi iimyuziyam ezikufutshane
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iProfayili yeNtshona Koloni
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT graph kwi-Case Western
Ikholeji yaseWoster. Allen Grove
Indawo: Wooster, Ohio
Ubhaliso: 2,003 (zonke iidanga lokugqibela)
Iintlukwano: Iiprogram eziPhezulu zoPhando; isahluko sePhi Beta kappa ngamandla kwi-liberal arts kunye nezesayensi; ilungu leekholeji ezintlanu ze-Ohio kunye ne- Oberlin , iKenyon , iOhio Wesleyan kunye neDenison
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yekholeji yaseWoster
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT umzobo weKholeji yaseWoster
IYunivesithi yaseSansey Chapel. Allen Grove
Indawo: Granville, Ohio
Ubhaliso: 2,277 (zonke iidanga lokugqibela)
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu kakhulu zelizwe; Umlinganiselo we- 10 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty ; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; olufanelekileyo lwemali; I-campus ye-900-ekre ihlala kwikhilomitha eyi-550 ye-biological reserve
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela i- Profile ye-University of Denison
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT graph yeDenison
Kenyon College. Curt Smith / Flickr
Indawo: Gambier, Ohio
Ubhaliso: 1,708 (zonke iidanga lokuqala)
Ukwahlukana: u- 9 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ootitshala ; ubungakanani beklasi yobukhulu be-15; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; I-campus ifaka i-380-acre nature
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseKenyon
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT graph eKenyon
EDowntown eMarietta, eOhio. UTim Kiser / Wikimedia Commons
Indawo: Marietta, Ohio
Ubhaliso: 1,224 (i-1,144 izifundo zakudala)
Ukuphazamiseka: Imbali edumileyo ehamba phambili ngo-1797 (njenge-Muskingum Academy); isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; inkqubo ephakamileyo yemfundo; Umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty kunye nobukhulu bomgangatho we-12; iiprogram eziphambili; Iiprogram zezemidlalo ze-NCAA Division III
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprofayili yaseMarietta
IMiami University yaseOhio
KwiMyunivesithi yaseOhio. Wikimedia Commons
Indawo: Oxford, Ohio
Ubhaliso: 19,697 (16,981 abafundi bezatifikethi zokugqibela)
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi ezidala kunazo zonke kwilizwe; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; Ukhuphisana kwiCandelo le-NCAA I -Confederation Mid-American Conference ; izinga eliphakamileyo lokuphumelela kwiCandelo leSikolo
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yaseMiami yeYunivesithi
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo kwi-University of Miami
I-Oberlin College. Allen Grove
Indawo: Oberlin, Ohio
Ubhaliso: i- 2,912 (i-2,895 iiprogram)
Ukwahlukana: u- 9 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ootitshala ; I-Conservatory eqinile yoMculo; isahluko sePhi Beta Kappa ; Ikholeji yokuqala e-US; umzimba ohlukeneyo wabafundi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile ye-Oberlin College
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT umdwebo we-Oberlin
I-Ohio Northern University yebhola lebhola. Erik Drost / Flickr / CC BY 2.0
Indawo: Ada, Ohio
Ubhaliso: 3.108 (2,274 abafundi beeprogram)
Uhlobo lweziko: encinci yeyunivesiti epheleleyo ebambene neCawa yaseMelika yeMethodist
Ukwahlukana: umlinganiselo we- 11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule ; Iiklasi zokuqala eziphakathi kwabafundi abangama-23; Uninzi lwabafundi lufumana uncedo oluncedo lwegranti; ukudibanisa ngamandla nobugcisa be-liberal kunye neenkqubo zobugcisa
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokumkelwa, tyelela iphrofayli yase - Ohio Northern University
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT umdwebo we-ONU
Ohio Stadium kwiYunivesithi yaseOhio State. Ikhredithi yezithombe: Acererak / Flickr
Indawo: Columbus, Ohio
Ubhaliso: 59,482 (45,831 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: Isahluko sePhi Beta iKappa sokuba nobugcisa obukhulu obubukhali kunye nezesayensi; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMerika ukufumana amandla okuphanda; enye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu ; ilungu leCandelo le-NCAA I- Big Ten Conference
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayili yase - Ohio State
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-Ohio State
GE Uhambo EPISCenter kwiYunivesithi yaseSukuton. IiProjekthi zokuPhuhliswa kwe-Ohio - ODSA / Flickr
Indawo: Dayton, Ohio
Ubhaliso: 10,803 (8,330 abadlulileyo)
Uhlobo lweziko: eyunivesithi ebanzi yabanzi ehlangene necawa yamaKatolika
Ukwahlukana: Inkqubo yoosomashishini iye yabhalwa kakhulu yi- US News kunye neNgxelo yehlabathi ; Inqanaba eliphezulu lolonwabo lwabafundi; enye yeekholeji zaseKatolika eziphezulu ; I-Dayton Flyers incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Conference ye-Atlantic 10
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iYunivesithi yaseSwedton
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT graph kwi-University of Dayton
University of Xavier
IYunivesithi yeBhola yeYunivesithi. UMichael Reaves / Getty Images
Indawo: Cincinnati, Ohio
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zeeKatolika eziphezulu ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; iiprogram ezingabalulekanga; AbakwaMusketeers bancintisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference ye-Big East
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yaseYunivesithi yaseYunivesithi
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo we-Xavier
I-MIT - i-Massachusetts Institute of Technology
Izaziso ze-Cal Maritime Academy
I-Wentworth Institute of Technology Admissions
I-Randolph-Macon College Admissions
IAccount University Admissions
I-Misericordia University Admissions
I-Long Island University (LIU) eBrooklyn Admissions
I-Admissions College yaseMuhlenberg
I-Longwood University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Nqakraza kabini ukuzalisa i-Handle ukukopa iifomula kwi-Excel
Iingcebiso zokucoca i-ATV yakho
Umzekelo Isivakalisi seLwimi Nika
Ukulandelelana kwamaxesha eSpeyin
Iindleko zoLuhlu lweBhodi
Iikholeji ze-Undergraduate ezikulungiselela iSikole sezoTyirha
Ukuxoxa ngeSifundo soMhlobo kubafundi besiNgesi
I-Seton Hall YeeNyuvesi zeNyuvesi
IiNdlela eziNzululwazi zokufumana abantu kwiPlayipi phantsi
Yiyiphi iNgqungquthela yokuThetha?
Ibhola leMfazwe yoMbhoshongo
Abadlali bebhola kunye namaCants
I-Kit Survival Kit: Izinto ezili-10 eziyimfuneko
Iikholeji zeeKholeji kunye neeRhafu zokuLula
Uluhlu lwezinto eziqhelekileyo ezenzekayo kwizinto
I-MARSHALL - Igama lomnqophiso kunye nentsapho yomlando
Indlela yokuchaza iNtshona, iSouth, isiLatin kunye ne-Anglo Melika